Maxkamadda Sare Ee JSL Oo Ka Qarnaqday 81 Dacwadood – Great Banaadir
Hargeysa (SOLNA) – Maxkamadda Sare ee Jamhuuriyadda Somaliland ayaa ka garnaqday 81 dacwadood oo isugu jira dacwado madani ah iyo dacwado ciqaab ah, waxaana dacwadahaasi qaaday garsooreyaal iyo kaaliyeyaal ay weheliyaan hal xeer ilaaliye oo katirsan Maxkamadda Sare ee Somaliland.
Dacwadahan ayay ka hawlgaleen wafti balaadhan oo uu hogaaminaayey Guddoomiye Kuxigeenka Maxkamadda Sare ee Somaliland Maxamed Cumar Geelle iyo 9 Garsoore, 6 Kaaliye iyo Hal xeer Ilaaliye Guud oo ka socday Xafiiska Xeer Ilaalinta Guud ee Qaranka, waxaanay dacwadahan ku qaadeen safar qaatay muddo 15 cisho ah oo ay ku tageen Goboladda Saaxil, Sanaag iyo Togdheer, sida lagu sheegay qoraal kooban oo kasoo baxay Waaxda Warbaahinta ee Maxkamadda Sare ee Somaliland oo soo gaadhey Wakaaladda Wararka Somaliland ee SOLNA.
Qoraalkan ayaana u dhignaa sidan:-
Wafti uu hoggaaminayay guddoomiye ku-xigeenka Maxkamadda Sare Maxamed Cumar Geele oo ka koobnaa 9 garsoore iyo 6 kaaliye oo uu wehelinayo hal-xeer-iaaliye guud, oo ka socday xafiiska xeer-ilaalinta guud ee qaranka, ayaa safar shaqo oo qaatay 15 cisho ku tagay gobolada Saaxil, Togdheer iyo Sanaag.
Ujeedada u weyn ee safarka ayaa ahayd sidii maxkamadda sare ee dalku ugu fudaydin lahayd, muwaadiniinta ay ka fogtahay deegaannadooda xarunta maxkamadda sare, isla markaana adeeg garsoor oo hufan ay ugu heli lahaayeen deegaannada ay ku noolyihiin, si ay uga baaqsadaan safar dheer oo ay u soo galaan magaalada Hargaysa, oo ay tahay xarunta maxkamadda sare.
Waftiga garsoorayaasha ayaa 15-kii bishii 12-aad ee 2020-ka, ka bilaabay safarkooda magaalada Berbera iyo deegaannada kale ee gobolka Saaxil, waxaanay uga sii gudbeen gobolka Togdheer halka ay socdaalkooda shaqo ku soo af-meereen gobolka Sanaag 30-kii bisha. Mudadii waftiga ka socda maxkamadda sare ay safarka shaqo ku gudo jireen waxay ka soo garnaqeen 81 dacwadood oo iskugu jiray 59 dacwadood oo madani ah iyo 22 dacwadood oo ciqaab ah.
Bil walba qayb ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda sare ayaa u baxa gobolada kala duwan ee dalka, waxaanay qayb ka tahay dedaalada ay maxkamadda sare ugu jirto fidinta adeega garsoorka, hase ahaatee safarkan u danbeeyay ayaa ahaa kii ugu cuslaa ee sannadka 2020-ka ay tiro intaa le’egi hal mar xarunta maxkamadda sare ka guurto.